Condom ကို ဘယ်လို စနစ်တကျ သုံးမလဲ - Hello Sayarwon
Dr. Seinn Moe Satt မှ ရေးသားသည်။2ပတ် အကြာက တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Condom တွေဟာ စနစ်တကျသုံးတတ်မယ်ဆိုရင် သင့်ကို မလိုချင်တဲ့ကိုယ်ဝန်မရအောင် တားဆီးပေးနိုင်ရုံသာမက… . လိင်ကတဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေကိုလဲ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်..။ ကွန်ဒုံးတွေကို အရောင်စုံ… အနံ့စုံ… အရွယ်အစားအစုံရနိုင်ပြီး မိန်းမကိုယ်သာမက စအိုနဲ့ ဆက်ဆံခြင်းတွေမှာလည်း သုံးလို့ရပါတယ်…။ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေကိုလည်း 98% လောက်ထိတားနိုင်တယ် ဆိုပါတယ်..။
ကွန်ဒုံးအိတ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်နဲ့ ကွန်ဒုံးပေါ်မှာ အပေါက်အပြဲရှိမရှိသေချာစစ်ပါ..
ကွန်ဒုံးအိတ် ဒါမှမဟုတ် ကွန်ဒုံးမှာ အပေါက်အပြဲအပျက်အစီးရှိနေတယ်ဆိုရင် … လုံးဝမသုံးသင့်ပါဘူး.။ ပျက်စီးနေတဲ့ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်နေတဲ့ ကွန်ဒုံးကိုသုံးတာက မလိုချင်တဲ့ကိုယ်ဝန်နဲ့ လိင်ကတဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါဆိုးတွေကို လက်ယပ်ခေါ်နေသလိုပါပဲ..။
အထုပ်ကို သေချာဖွင့်ပြီး ကွန်ဒုံးကို ထုတ်ပါ
ရေဓာတ်ကိုအခြေခံတဲ့ ချောဆီသုတ်ရင်သုတ်ပါ… ဆီကိုအခြေခံတဲ့ ချောဆီ ဒါမှမဟုတ် ဆီမှန်သမျှကိုရှောင်ပါ….
လိင်ဆက်ဆံချိန်ကြာတဲ့အခါ ပွတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပြီး မတော်တဆကွန်ဒုံးပေါက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်..။ ဒါကိုရှောင်နိုင်ဖို့ ရေဓာတ်ကို အခြေခံတဲ့ ချောဆီ ဥပမာ KY jelly လိုမျိုးကို သုံးပေးနိုင်ပါတယ်…။ နောက်ပိုင်းထုတ် ကွန်ဒုံးတော်တော်များများမှာတော့ ချောဆီပါတွဲရက်ပါပြီးသားမို့ သီးသန့်ချောဆီမသုံးလဲရပါတယ်..။ အထူးသတိပြုရမှာကတော့ ဆီဓာတ်ကို အခြေခံတဲ့ ချောဆီကို မသုံးမိဖို့ပါပဲ..။ သံလွင်ဆီအပါအဝင် ဘယ်ဆီကိုမှ မသုံးသင့်ပါဘူး..။ ဒီလိုသုံးခြင်းဟာ ပိုပြီး ကွန်ဒုံးကို လွယ်လွယ်ကူကူ တောင် ပေါက်စေနိုင်ပါတယ်..။
သုက်ရည်ထွက်ထွက်မထွက်ထွက် သင်လိင်ဆက်ဆံချိန်တိုင်းကွန်ဒုံးကို သုံးသင့်ပါတယ်..။
သုက်ရည်မထွက်ပေမယ့် အရည်ကြည်မှာတောင် သုက်ပိုးပါနိုင်တဲ့အတွက် ကွန်ဒုံးမသုံးရင် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်သလို ရောဂါပိုးတွေကူးစက်နိုင်လို့ လိင်ဆက်ဆံချိန်အစကနေ အဆုံးအထိ ကွန်ဒုံးကို မဖြစ်မနေသုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်..။
သင်လိင်ဆက်ဆံမှု ပြီးဆုံးလို့ ဖြစ်ဖြစ်… လိင်ဆက်ဆံချိန် ကြာလို့ နောက်ကွန်ဒုံးတစ်ခုလဲတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်…ကွန်ဒုံးကို ချွတ်တဲ့အခါ ကွန်ဒုံးရဲ့ ကွင်းအမာဖက်ကနေ အောက်ကို ဖြေးဖြေးချင်းဆင်းပြီး လက်တစ်ဖက်က သင့်လိင်တံကိုကိုင်ပြီး ဆွဲချွတ်ပါ.။ ဒီလိုချွတ်တဲ့အခါ ကွန်ဒုံးထဲက အရည်တွေ မလျှံထွက်သွားစေဖို့ ဂရုစိုက်ပါ..။
ချွတ်ပြီးတဲ့ ကွန်ဒုံးကို ကွင်းအမာဖက်ကနေ ပိတ်ချည်ပြီး အမှိုက်ပုံးထဲကို စနစ်တကျစွန့်ပစ်ပါ..။ စွန့်ပစ်ပြီးတဲ့နောက် သင့်လက်ကို ဆပ်ပြာ ရေတို့နဲ့ သေချာသန့်စင်ပါ..။
နောက်တစ်ကြိမ် လိင်ဆက်ဆံရင် ကွန်ဒုံးအသစ်ကိုပဲ သုံးပါ
တကယ်လို့ သင်နဲ့ သင့်အဖော်က နောက်တစ်ကြိမ်လိင်ဆက်ဆံဖို့ ဆန္ဒရှိနေတယ်ဆိုရင် …နောက်ထပ် ကွန်ဒုံးအသစ်ကိုသုံးပါ..။ သုက်ရည်ထွက်ထွက်မထွက်ထွက်… ဘယ်အချိန် လိင်ဆက်ဆံမှုကိုလုပ်လုပ် ကွန်ဒုံးအသစ်ကိုသာ သုံးပါ..။ ဒါမှသာ အန္တရာယ်နည်းပါးတဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုကို သင်ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ..။